गम्भीर रोगसंग लड्दै आएका अभिनेता इरफान खान आईसीयूमा – Wow Sansar
चोरीको आरोपमा श्रीमती पक्राउ परेपछि दीपक मनाङ्गेले भने, डेढ म​हिना बाट घ​र छोडेर हिंडीन्, अहिले मैले नै पक्राउ गर्न लगाएको हुँ, कडा कारवाही होस्
सावधान ! धेरै नखानुहोस् यस्ता खाना, नत्र छिट्टै खुइल्याउँछ तपाईको तालु
हार्दिक बधाई : अभिनेत्री स्वेता खड्काको बिहे मंसीर २२ गते यी केटा सङ्ग हुदैं !
कोरोना खोप मा सफलता असर सुनमा : आज पत्याउनै नसकिने गरि यस्तो भयो सुनको भाउ
पोखरा बस पार्कमा गाडी भित्रै श’ब यसरी आ’यो ! बसै भरी यस्तो थियो, कण्डक्टरले खोले यस्तो बास्तविकता(भिडियो सहित)
एउटा सानो गल्तीले घट्यो दु:खत दु’र्घटना !! २ जनाको घट’नास्थलमै मृ’त्यु
दुःखद खबर; बस दुर्घटना, १७ जना घा’इते
मुख्य पृष्ठ /News/गम्भीर रोगसंग लड्दै आएका अभिनेता इरफान खान आईसीयूमा
गम्भीर रोगसंग लड्दै आएका अभिनेता इरफान खान आईसीयूमा
एजेन्सी,मुम्बई । बलिउड अभिनेता इरफान खानलाई स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि मुम्बईस्थित कोकिलाबेन अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना भएका छन् । उनलाई के भएको हो भन्ने भने नखुलाइए पनि स्वास्थ्य अवस्थामा समस्या आएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको जानकारी दिईएको । तर इरफानका परिवारले भने आधिकारिक रुपमा केही जानकारी दिएका छैनन् ।
तर इरफानका एक प्रवक्ताले भने उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको पुष्टि गरेका छन् । उनले भने, ‘हो, इरफान खानलाई मुम्बईको कोकिलाबेन अस्पताल भर्ना गरिएको छ । उहाँलाई कोलोन इन्फेक्सन भएको छ । हामी उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी दिइरहनेछौं । अहिले उहाँ चिकित्सकको निगरानीमा हुनुहुन्छ । उहाँको शक्ति र साहसका कारण अहिलेसम्म यो रोगसँग लड्दै आउनु भएको छ । हामी विश्वस्त छौं कि उहाँको अपार इच्छा शक्ति र उहाँलाई माया गर्ने सबैको प्रार्थनाले चाँडै नै निको हुनुहुनेछ ।’
गत वर्ष लन्डनमा उपचार गराएर फर्केपछि इरफान मुम्बईको कोकिलाबेन अस्पतालकै डाक्टरको निगरानीमा नियमित रुपमा स्वास्थ्य जाँच गराइरहेका छन् । ‘अंग्रेजी मिडियम’ छायांकनका बेला पनि उनको स्वास्थ्यमा समस्या आएको बताइएको थियो । उनको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण केही समय छायांकन पनि रोकिएको थियो ।
गत शनिबार बिहान मात्र उनकी आमा सइदा बेगमको ९५ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउनका कारण उनी आमाको अन्तिम संस्कारमा जान पाएनन् । उनी भिडियो कन्फरेन्समार्फत आमाको अन्तिम संस्कारमा सहभागी भएको हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ । भारतमा मे ३ सम्म लकडाउन लम्ब्याइएको छ ।५४ वर्षीय इरफान खान न्यूरोएन्डोक्राइन ट्युमरबाट ग्रसित छन् । उनी यसको लन्डनमै उपचार गराइरहेका थिए । सन् २०१८ को मार्चमा उनमा यो रोग देखिएको आफैले ट्वीटमार्फत बताएका थिए ।
श्रीमानबाट टाढा हुन महिलाको यस्तो चाल, वास्तविकता खुल्दा प्रहरी नै चकित !
दुर्घटनामा परेर निधन भएका व्यक्त्तिमा कोरोना पोजेटिभ
कोरोनासँग डराएनन् अनुष्का र विराट, यही हो मौका भन्दै रातदिन काममा खटेर कमाए मोटो रकम
पोखरामा एक्कासी ३० वर्षका युवकले यस्तो भन्दै फेवातालमा हामफाले! छेउछाउको मानिस सबै चकित